Shir Addis Ababa uga socdo Sirdoonka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea | KEYDMEDIA ONLINE
Shir Addis Ababa uga socdo Sirdoonka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea
Shirkaan ayaa daba socdo booqasho uu dhawaan Madaxweyne Farmaajo ku tegay magaalada Asmara.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxda Sirdoonada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa Shir uga socda Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Shirkan ayaa la rumeysan yahay inuu ka dambeeyay booqashada todobaadkii hore Madaxweyne Farmaajo ku tagay Asmara oo siyaasiyiinta mucaaradka shaki weyn ka muujiyeen iyo booqasho kedis ah oo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ku tagay Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Keydmedia Online ayaa dhowr jeer oo hore baahisay in magaalada Muqdisho laga soo dejiyay Ciidamo si qarsoodi ah loogu soo tababaray dalka Eretrea, kuwaas oo Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin doonayaan in ay doorashada soo socto gaashaan ka dhigtaan.
Wixii ku soo kordho kala soco Keydmedia Online